ISO4427 mureza HDPE dredge / migodhi mutopota kubva dn160-1200mm, welded pamwe flanges panguva zvose magumo, rinowanika 6m kana 11.8m urefu, customrized simbi aizovatsigira marin'i iripo, yepamusoro panguva yakanakisisa Mutengo. Contact nesu zvakawanda wedu HDPE dredge nenyere !!!
HDPE dredging nyere chinoitwa na HDPE (yakakwirira arambe achirema polyethylene) zvinhu uye zvakaberekwa mu kukura siyana kuitira kuti kushandisa zvikurukuru pamusoro pegungwa kutakura mugungwa jecha nokuda dredge mumadhaka. The HDPE dredge nenyere yave kugadzirwa uye welded se "HDPE flanged mutopota", uyo mativi vari welded pamwe HDPE flange adapters & simbi achitsigirwa zvindori.
The HDPE dredging mutopota kunogona nyore kuti vakaungana kana dismountabled, nokuda screwing up / kure nekiyi / nzungu kuti methanical kubatana zviviri simbi aizovatsigira zvindori pakupera nenyere.
SUNPLAST HDPE dredge mutopota anowanzoshandurwa kubudiswa muna 5.8m kana 11.8m lenghts. Nenyere anogona kupiwa kubva dn160-1200mm dzakashongedzwa rusvingo ukobvu sezvo paminiti zvakasiyana SDR & akagadzira kufurirwa rating, uye tsika yakaitwa simbi tsigiro zvindori zviripo.
Product zita HDPE dredge mutopota
Sizes iripo DN160-1200mm
SDR / kumanikidzwa ratings SDR11-PN16, SDR13.6-PN12.5, SDR17-PN10, SDR21-PN8, SDR26-PN6
Top unhu mhandara PE100 mbishi zvinhu
Mavara dziripo mutopota Black kana zvitema, kana sezvo pa zvikumbiro
Standards nokuti mutopota ISO4427, AS / NZS4130, BS EN 12201
Standards nokuti simbi Ichitsigirwa zvindori
Nyora nenyere Customer kuti Logo zvinogona ndokutsika
mimwe iripo Hongu, mharidzo dziripo miduku
kurongedza nzira Normal ekisipoti chiputiriso.
Nenyere kureba kunogona kuva muna 5.8m kana 11.8m, mativi welded pamwe flanges
Production kutungamirira nguva Zvichienderana hurongwa uwandu.
Mazuva anenge 10 kuti 20ft mudziyo, mazuva 15-20 kuti 40ft mudziyo
garandi nguva Makore 3 nokuti dzose kushandisa
Payment izwi T / T kana LC pa kuona
FOB vachizvitakudza chiteshi Ningbo kana Shanghai China
Place chakangomuka Zhejiang, China
SUNPLAST HDPE dredge mutopota anogona kupiwa kubva dn160mm kusvika 1200mm. The nokurondedzerwa sezvo pazasi:
For PE100 zvinhu
Somunhu yakanaka mhinduro kuti dredging basa, SUNPLAST HDPE dredge mutopota ane mikana yakawanda sezvinotevera:
☑ ngura nemishonga
☑ High kuoma
☑ Light uremu
☑ Nyore vaungane kana dismountabled
☑ Excellent kuchinja uye kuramba anokwenya kugona.
☑Good kupfeka nemishonga, pasi rusvingo kukweshera coefficient, duku aibuda nemishonga, chakanakisisa irikupa okufunga.
☑ Low hurongwa cost, zvishoma Nokuraramisa tinorasikirwa
2 padiki HDPE Pipe
Zvinoyangarara Dredging Pipe
HDPE Dredge ichiyangarara Pipe